Ahoana ny fametrahana ny indentation frantsay amin'ny Word | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | General, Cheats, Tutorials
Ny sangria frantsay dia karazana sangria izay ny tsipika voalohany amin'ny fehintsoratra dia raikitra amin'ny sisin'ny pejy ary ny sisa ahetsiketsika kely miankavia. Na dia tsy dia fahita loatra aza ny fampiasana an'io karazan-dentika io amin'ny lahatsoratra, Eny, izy io dia ampiasaina hanoratana isa sy hanoratana ny bokim-bokin'ny asa akademika amin'ny fenitra APA. Amin'ity lahatsoratra ity dia hampianarinay anao ny fomba fametrahana ny fironana frantsay ao amin'ny Word. Hanazava ny fomba anaovany azy tsikelikely izahay, amin'ny fiheverana fa ny fomba fanamboarana azy dia miovaova kely arakaraka ny rafitry ny solo-sainanao.
1 Manokatra antontan-taratasy iray ary apetaho andalana iray hanaovana fitiliana
2 Ahoana ny fametrahana ny sangria frantsay amin'ny Mac
3 Ahoana ny fametrahana indentation frantsay amin'ny Windows
4 Ahoana ny fametrahana ny indentation frantsay amin'ny pejin-tranonkala Word
Manokatra antontan-taratasy iray ary apetaho andalana iray hanaovana fitiliana
Andao hanao fitsapana. Mandehana any amin'ny Word ary apetaho andalana lahatsoratra. Manaraka izany dia mila mifidy ny fehintsoratra iray manontolo ianao. Ireo dingana izay harahinay manaraka dia miankina amin'ny Windows sy Mac ny rafitra miasa misy anao ary raha miasa amin'ny Word Online ianao na avy amin'ny kinova desktop.
Ahoana ny fametrahana ny sangria frantsay amin'ny Mac
Miaraka amin'ny fehintsoratra voafantina, mankanesa eo amin'ny bara ambony ary kitiho ny kiheba "format". Ao amin'ny menio mitete-midina dia mila misafidy ianao "fehintsoratra".
Hisokatra ho azy ny varavarankely. Ao amin'ny fizarana "indentation" dia tadiavo ny "spécial" ary safidio ny safidy "indentation frantsay". La halaviran'ny andalana voasoratra raha ny momba ny sisiny dia azo ovaina raha ovainao ny sanda voalamina ao "amin'ny:". Ao amin'ny efijery etsy ambany, azonao atao ny mijery ireo fiovana ireo. Rehefa afa-po amin'ny valiny ianao dia tsindrio "manaiky".
Ahoana ny fametrahana indentation frantsay amin'ny Windows
Hamarino tsara fa voafidy ny fehintsoratra irina. Avy eo, mankanesa any amin'ny takelaka "an-trano" ao amin'ny menio ambony ary tadiavo ny fizarana "fehintsoratra". Tsindrio ianao eNy marika aseho amin'ny sary etsy ambony ary ny varavarankely misy ny indentation sy ny spacing options dia hisokatra mivantana.
Eo am-baravarankely, Tadiavo ny fizarana "sangria" ary amin'ny "special" dia hisafidy "sangria frantsay" ianao. Eo akaikiny, eo ambanin'ny "in:" azonao atao ny manamboatra ny halalin'ilay fampiononana. Jereo ny boaty miseho eo amin'ny farany ambany ny varavarankely, io no topi-maso, rehefa faly ianao amin'ny valiny, kitiho ny "manaiky".
Ahoana ny fametrahana ny indentation frantsay amin'ny pejin-tranonkala Word
Ny fametrahana ny indentation frantsay amin'ny kinova tranokala Word dia tsotra be, tena mitovy amin'ny fomba anaovana azy amin'ny kinova desktop ho an'ny Windows. Rehefa voafantina ny fehintsoratra, mankanesa any amin'ny kiheba "mody" ary ao amin'ilay faritra "fehintsoratra" mila tsindrio ilay marika izay hita aseho amin'ny sary etsy ambony. Hisokatra ny varavarankely. Ao amin'ny fizarana "sangria" dia mila mankany amin'ny "special" ianao ary mifantina "sangria frantsay". Etsy ambany, eo ambanin'ny "in:" azonao atao ny manondro ny halalin'ny fampiononana.
Zavatra farany iray, angamba ny mihena ny menio ambony (indraindray toa izany no misy azy). Raha izany no anao dia manana safidy roa ianao:
Azonao atao maxima menio haciendo tsindrio ny tandindon'ny zana-tsipìka amin'ny sary etsy ambony.
ihany koa azonao atao ny manindry ireo teboka 3 (jereo ny pikantsary, voahodidina izy ireo). Hisokatra ny menio mirotsaka, mila tsindrio ianao "Safidy fehintsoratra" ary ny varavarankely dia hiseho miaraka amin'ny safidy indentation sy spacing.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ahoana ny fametrahana ny fironana frantsay amin'ny teny